हिमनदीको पानीले सँसारकै सुन्दरी « रिपोर्टर्स नेपाल
हिमनदीको पानीले सँसारकै सुन्दरी
प्रकाशित मिति : 2019 September 26, 10:26 pm
दुनियाँको अत्याधिक सुन्दर महिलाहरु कहाँका होलान् ? कुन देशका होलान् ? कुन स्थानका होलान् ? यो जिज्ञासा कस्मा नहोला ।
सँसारकै सुन्दर महिलाहरु हिमालयको काखमा अवस्थित एक स्थानमा बस्छन् । पाकिस्तानको उत्तरी भागमा हुन्जा नामक क्षेत्रमा दुनियाँका सबै भन्दा सुन्दर महिलाहरुको बसोबास छ ।
८७ हजार जनसंख्या रहेको हुन्जा उपत्यकामा विश्वकै सुन्दरीहरु बस्ने गर्छन् । उनीहरुको सामान्य पाकिस्तानीको औसत आयु ६० वर्ष रहेकोमा निकै हाँस्ने गर्छन । हुन्जाका सुन्दरीहरुको औसत आयु करिब १२० वर्ष रहेको छ । कतिपय डेढ सय वर्षसम्म बाँचेको तथ्य छ ।